ထက်ယံ @ HTET YAN - NEW [2016 Album] (MP3 320Kbps!) - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Album High Quality Htet Yan Lil Z X Box ထက်ယံ ရဲရင့်အောင် ရဲလေး ထက်ယံ @ HTET YAN - NEW [2016 Album] (MP3 320Kbps!)
ထက်ယံ @ HTET YAN - NEW [2016 Album] (MP3 320Kbps!)
12:42:00 AM 320 Kbps!, Album, High Quality, Htet Yan, Lil Z, X Box, ထက်ယံ, ရဲရင့်အောင်, ရဲလေး,
နင့်မှာငါရှိတယ် [Feat. ရဲ​လေး]
အိန်ဂျယ်​တွေလို [Feat. X Box]
အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ​နေထိုင်ခြင်း [Feat. Lil' Z]
Hello Girl [Feat. ရဲရင့်​အောင်]
Tags # 320 Kbps! # Album # High Quality # Htet Yan # Lil Z # X Box # ထက်ယံ # ရဲရင့်အောင် # ရဲလေး
Labels: 320 Kbps!, Album, High Quality, Htet Yan, Lil Z, X Box, ထက်ယံ, ရဲရင့်အောင်, ရဲလေး